buukar Xasan Cali oo ku dhowaaqay in uu yahay musharaxa guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle (Sawiro) - Hablaha Media Network
buukar Xasan Cali oo ku dhowaaqay in uu yahay musharaxa guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle (Sawiro)
HMN:- Siyaasiga Abuukar Xasan Cali Maqaney oo ka mid muddo dheer ku soo jirey howlaha siyaasada dalka ayaa ku dhowaaqay inuu yahay musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka cusub ee Hirshabelle.
Shir jaraa,id oo uu maanta xafiiskiisa ku qabtay Abuukar Xasan Cali oo ah haatan guddoomiye ku xigeenka gobolka shabeellaha dhexe ee dhanka arrimaha dib uheshiisiinta iyo federaalka Sh Abuukar Xasan Cali (Maqaneey) ayaa ku sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka.
Abuukar Xasan Cali ayaa sheegay inuu yahay mas’uul u taagan qabashada xilkaas aqoon badana u leh arrimaha baarlamaanka:“Waxaan ka mid ahaa baarlamaankii KMG ahaa ee Soomaaliya ee difaacay xuduuda badda Soomaliya waxaan aqoon buuxda u leeyahay arrimaha baarlamaanka iyo arimaha shareecada islaamka marka waxaan u taaganahay qabashada gudoomiyaha baarlamaanka ” ayuu yiri Abuukar Xasan Cali.
Abuukar Xasan Cali ayaa waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sare ku soo qaatay dugsiyo kala duwan oo ku yaal gobolka Sh/dhexe halka uu waxbarashadiisa Jaamacadana ku dhamaystirtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Musharax guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli lagu doonayo in lagu dhaariyo maalinta Sabtida ah ee soo socota xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliy.